Semalt Expert ao amin'ny tranokala Data Scraping - Tsara sy Bad Bots
Efa hatry ny ela ny fanasitranana tranokala webmasters, mpanao gazety, mpikirakira aterineto, mpandrindra, tsy mpandrindra, mpikaroka momba ny varotra, manam-pahaizana ary manam-pahaizana momba ny media sosialy. Misy karazana botsoa roa: tsara botsika sy bota ratsy. Ny boka tsara dia mamela ny fitaovam-pikarohana hanamarinana ny votoaty ao anaty tranonkala ary omena ireo tolotra ara-tsiansa sy ny mpizara dizitaly. Ny bota ratsy, etsy ankilan'izany, dia tsy misy ilàna azy ary mikasa ny hanimba ny voka-pikarohana fikarohana. Ny maha-ara-dalàna ny fanalana ny tranonkala dia miankina amin'ny karazana bôtes nampiasainao.
Ohatra, raha mampiasa ny boka ratsy ianao haka ny votoaty avy amin'ny tranonkala samihafa miaraka amin'ny fikasana hampiasa izany tsy ara-dalàna, dia mety hanimba ny tranonkala. Fa raha mampiasa ny boka tsara ianao ary misoroka ireo hetsi-panoherana mampidi-doza, anisan'izany ny fandavana ny fanafihana an-tserasera, ny hosoka an-tserasera, ny tetikady momba ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny lozam-pifanarahana, ny kaonty rakitsoratra, ny fahazoan-dàlana tsy voamarina, ny fanodikodinana dizitaly ary ny fangalarana ny toetra ara-tsaina, dia tsara sy mahasoa ny fampiroboroboana ny orinasanao amin'ny Internet.
Mampalahelo fa ny ankabeazan'ireo mpikirakira sy mpilatsaka an-tsokosoko dia tia botso-dratsy satria izy ireo dia fomba mora, manatanjaka ary manankarena amin'ny fanangonam-baovao raha tsy ilaina ny fiaraha-miasa. Ny orinasa goavana anefa dia mampiasa ny tranonkala ara-dalàna noho ny tombony azony ary tsy te hanimba ny lazan'izy ireo amin'ny aterineto amin'ny tranonkala tsy ara-dalàna. Ny hevitry ny ankapobeny momba ny maha-ara-dalàna ny habetsaky ny tranonkala dia toa tsy misy olana satria tao anatin'ny volana vitsy lasa dia lasa mazava fa ny rafi-pitsarana federaly dia manakorontana tetikady maimaim-poana amin'ny tranonkala tsy ara-dalàna.
Nanomboka toy ny dingana tsy ara-dalàna tamin'ny taona 2000 ny fanasitranana tranonkala, raha noheverina ho tsy misy dikany ny fampiasana botsika sy spiders mba hanefena ireo tranonkala..Tsy nisy fombafomba maro natao hampiato ity fomba fitsaboana ity amin'ny alàlan'ny fampielezana ny aterineto hatramin'ny taona 2010. Ny eBay voalohany dia nametraka ny didim-pitsarana voalohany amin'ny Bidder's Edge, milaza fa ny fampiasana bots amin'ny tranokala dia nanitsakitsaka ny lalàna momba ny trosan'ny lalàna. Tsy ela dia nanome baiko ireo fitsarana ireo satria tsy maintsy manaiky ny fepetra sy ny fepetran'ny tranonkala ny mpampiasa ary marobe ireo bots ireo no nesorina satria mety hanimba ny milina computer amin'ny eBay. Vetivety teo no nipetrahan'ilay fitsarana ny fitsarana, ary ny eBay dia nanakana ny olona tsy hampiasa bots amin'ny tranonkala manala baraka na inona na inona tsara na ratsy.
Tamin'ny taona 2001, ny masoivohom-baovao iray dia nanenjika ireo mpifaninana izay nanakona ny votoatiny tamin'ny tranonkala miaraka amin'ny fanampiana ireo spiders sy bota ratsy. Noraisin'ireo mpitsara indray ny fepetra noraisina tamin'ny heloka bevava ary nankasitraka ireo niharam-boina, nilaza fa ny tranonkala sy ny fampiasana botsika dia mety hanimba ny orinasan-tserasera isan-karazany.
Amin'izao fotoana izao, ho an'ny fikambanana akademika, tsy miankina ary ny fampahalalam-baovao, dia maro no miankina amin'ny fomba fitsaboana maoderina, ary maro ny fitaovana fandinganana tranonkala no novolavola amin'io lafiny io. Ankehitriny dia miteny ny manam-pahefana fa tsy ny fitaovana rehetra azo antoka, fa ireo izay miditra amin'ny volany na avo lenta dia tsara kokoa noho ny malalaka tranokala maimaim-poana .
Tamin'ny 2016, ny Kongresy dia nandà ny lalàna voalohany mba hamelezana ireo bota ratsy ary hankasitraka ireo boka tsara. Noforonina ny lalàna Better Online Sale (BOTS) Better (BOTS), izay nandrara ny fampiasana rindrambaiko tsy ara-dalàna izay mety hikorontana ireo tranonkala, manimba ny fikarohana sy ny fandravàna ny orinasa. Misy ny olana ara-drariny. Ohatra, ny LinkedIn dia nandany vola be teo amin'ireo fitaovana izay nanakana na nanala basy ratsy ary nandrisika botsika tsara. Satria efa nanandrana nanapa-kevitra ny hanamarina ny maha-ara-dalàna ny tranonkala ny orinasam-panjakana, ny orinasa dia nangalatra ny angon-draketrany Source .